मलाई रुवाई रहने मेरो 'त्यो प्रेम' | Citizen Post News
मलाई रुवाई रहने मेरो 'त्यो प्रेम'
२०७७ असार ४ गते ०९:०२
आज धेरै बर्षपछि पुरानो इकोनोमिक्सको त्यो नोटबुक खोल्दा ती बितेका अतित आँखा वरिपरि नाच्न थाल्यो । र, पुरै शरिर काम्दै गयो । आँखाबाट आँसु बहन लाग्यो । कुरा एसएलसी पछि आइकम पढ्दाको हो । कलेजको पहिलो दिनको कक्षा थियो । म धेरै टाढादेखि साइकलबाट कलेज जाने गर्थे । कक्षामा प्रवेश गर्नासाथ मेरा साथीहरुले चिच्याए-अरे तेरो चेन खुला छ ।
तुरुन्त पैन्टको चेन हेरँ । फेरि उनीहरुले भने-अरे यार बागको चेन भनेको हो ।
फेरि पुरै कक्षा हाँस्न लाग्यो । र, कोई मुस्कुराई रहेकी थिइन । मैले जसै उनीतर्फ हेरें । उनले मुस्कुराउन बन्द गरिन् । केही दिन यसरी नै कक्षा चलिरह्यो । केही अलग थियो । त्यही कि जब रिमाले म तिर हेर्दा मेरो टाउको निहुँरिन्थ्यो ।
र, कहिलेकहीँ मैले उनलाई हेर्दा उनी हल्का मुस्कुराउँथिन । उनको त्यो हसाई हर खुसी भन्दा मुल्यवान थियो । कक्षाको छुट्टीपछि घर जाने बेलामा मैले उनलाई देखेँ बिना जादैनथिएँ । उनी चोकबाट आफ्नो घरतिर मोडिन्थिन ।
मेरो एउटा आदत थियो कि नेपाली लेख्दा माथिबाट लाइन तान्दिनथिएँ । त्यस दिन नेपालीको शिक्षकसँग नोटबुक चेक गर्न जाँदा त सरले भने कि लाइन किन मादैनौं ? मैले भने-सर लाइन मार्न जरुरी हुन्छ र ? सरले भने-अवश्य । कक्षा हाँस्न थाल्यो । कोई सवैभन्दा धेरै हाँसिरहेकी थिइन । उनी रिमा थिइन ।
उनी हाँसेको देखेर मलाई बेग्लै प्रकारको खुुसी प्राप्त हुन्थ्यो । मैले उनलाई हेरिरहन्थे । र कुनै न कुनै बहानामा उनलाई हँसाईरहन्थे । तर उनलाई कहिल्यै केही भन्ने हिम्मत भएन ।
पुरै कक्षालाई लाग्यो कि हामी दुई एक अर्कालाई प्रेम गछौं । अब सायद उनलाई पनि लाग्न थालेको थियो कि मैले उनलाई धेरै चाहान्छु । एक दिन उनी कलेज आइनन् ।
अर्को दिन मसँग पहिलो पटक केही माग्दै भनिन्,-मलाई तिम्रो इकोनोमिक्सको नोटबुक देउ न ।
त्यसपछि मैले भने-ठिक छ हाफ टाइमपछि दिउँला ल ।
फेरि मैले हाफ टाइममा नोटबुकको इन्डेक्स पेजमा लेखेँ-रिमा तिमी मेरो जिन्दगी हौं । आइ लभ यू ! स्वर्ग झैं हुन्छ मेरो जिन्दगी रिमा यदि तिम्रो साथ हुन्छ भने ।
अब त्यो नोटबुक मैले उनलाई हाफ टाइमपछि दिएँ ।
मैले त्यस दिनको अन्तिम कक्षामा उनलाई हेरेँ । तर उनले मतिर ध्यान नै दिइनन् । फेरि त्यस दिन कलेजको छुट्टीपछि सँधै झैं उनलाई हेर्नको लागि म चोकमा पर्खिरहेको थिएँ, मेरा साथीहरुले पनि साथमा साथ दिए । उनी साइकल चलाउँदै आउँदै थिइन ।
र, मलाई हेरेर मुस्कुराउँदै भनिन्,-तिम्रो नोटबुक मेरो डेस्कको ड्रयरमा छ । र उनी लागिन । मेरा साथीहरुले भने-यदिन तैले बोलाउँदा पछि फर्केर रिमाले हेरि भने यो पक्का हो कि उनले तसँग प्रेम गर्छे ।
मैले पनि रिमालाई बोलाएँ ।
उनले पछाढि फर्केर मलाई हेर्न चाहिन र उनको साइकलको ह्याण्डल मोडियो । अगाडिबाट आउँदै गरेको ट्रक उनको साइकलमा ठोक्कियो । त्यो ट्रक उनलाई र उनको साइकललाई किच्दै गयो ।
र, मैले केही गर्न सकिन । यति समय पनि पाइन कि उनलाई अस्पताल लिएर जाऊँ । उनको श्वास हमेशाको लागि रोकियो । र, म राईरहेँ । त्यसपछिका धेरै दिनसम्म म कलेज गइन । सबै साथीहरुले कर गरेपछि धेरै हिम्मत जुटाएर कलेज गएँ ।
पहिला झैं यसपटक पनि उनको बेन्चतिर नजर गइरहेको थियो ।
हाफ टाइम भयो । सवै बाहिर निस्किएँ । म उनको बेन्चमा गएर बसे । उनको डेस्कको ड्रयर खोलेर हेर्दा मेरो इकोनोमिक्सको नोटबुक थियो । त्यसमा लेखिएको थियो-हो म तिम्रो जिन्दगी हुँ, आइ लव यू टु !
यति पढ्नासथा मेरा आँखाबाट आँसु झर्यो । काश मैँले त्यस दिन उनलाई नबोलाएको भए ! आज उनी साँच्चिकै मेरो जिन्दगीमा छैनिन । मेरो जिन्दगी हुन्थिन ।
आँसु सुकी सक्यो । जसरी सिसकी आउँदैन,
तिमी छैनौं भने मलाई बाडुल्की आउँँदैन,
लेख्न त् लेख्दै होलिन मेरो नामको कैयौं चिट्ठी तर तिमी जहाँ छौं वहाँबाट कुनै चिट्ठी नै.....